RASMI: Mati Fernandez oo ku biiray AC Milan – Gool FM
RASMI: Mati Fernandez oo ku biiray AC Milan
Raage August 31, 2016
26 de Octubre de 2014/MILAN Matias Fernandez durante el partido por el Campeonato Seria A del Calcio italiano entre Milan vs Fiorentina jugado en el Estadio San Siro en Milan FOTO:CORDON PRESS/AGENCIAUNO
(Milano) 31 Agoosto 2016 – Mati Fernandez ayaa si rasmi ah ugu biiray kooxda AC Milan oo uu qaab amaah ah kula biiray, kaddib markii uu laacibkan Fiorentina uu diidey Cagliari.
Wakiilka laacibkan caalamiga ah ee reer Chile ayaa fiidkii yimid xarunta Milan ee Casa Milan, saacad uun kahor xilli uu xirmi rabey suuqa kala iibsiga xagaaga.
Laacibkan ayaa lasoo siistay €0.5m oo euro, iyadoo marka dambe lagula wareegi karo €1m oo euro.
Laacibka ayaa haatan ku sugan South America oo uu waajib qaran u jiro, sidaa darteedna caafimaadka ma mari karo, iyadoo ay Fiorentina laacibka la jeclayd Cagliari, balse uu 30-jirkani doorbiday Milan.
Laacibkan oo ah kubad qaabeeye ayaa anfacaya kooxda AC Milan, isagoo horay usoo maray kooxaha Sporting CP, Villarreal iyo Colo Colo.
Imaanshiyaha Mati Fernandez ee Milan ayaa sidoo kale ka dhigan in daaqadda laga tuuray doonistii Luca Rigoni oo Genoa ah, oo markii hore dookh 2-aad u ahaa kooxda Milan.
26 de Octubre de 2014/MILAN
Matias Fernandez durante el partido por el Campeonato Seria A del Calcio italiano entre Milan vs Fiorentina jugado en el Estadio San Siro en Milan
Xiddig Manchester United muhiim u ah oo waajibaad qaran ku dhaawacmay
10-kii saxiix ee maanta (Deadline Day-ga) loogu hadal haynta badnaa barta Twitter-ka